Waxyaabihii ugu Muhiimsanaa Shirka Golaha Wasiirada Galmudug ee Guriceel ka dhacay
HomeWararka SomaliyaGalmudugWaxyaabihii ugu Muhiimsanaa Shirka Golaha Wasiirada Galmudug ee Guriceel ka dhacay
October 29, 2021 Galmudug, Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa shir gudoomiyay shirka Golaha Wasiirada DGM oo xalay ka dhacay degmada Guriceel.
Shirka ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen amniga gudaha, maqaamka magaalada Guriceel iyo warbixinta Guddiga Gurmadka Gurceel.
1- Amniga Guud
Golaha Wasiirada DGM ayaa warbixin ka dhageystay Wasaaradda Amniga oo ka warbixisay xaaladda guud ee amniga iyo mida degmada Guriceel oo dhawaan si buuxda gacanta dowladda ugu soo laabatay isla markaasna ay dowladda diyaar u tahay suggida amniga iyo ilaaliinta nabadgelyada guud.
2-Guddiga Gurmadka Guriceel
Guddiga, ayaa ka warbixiyay gurmadkii ay soo gaarsiiyeen dadkii ka barakacay magaalada iyo dadaalada dib u dajinta loogu sameynayo.
3- Maqaamka Guriceel
Golaha Wasiirada Dowladda Galmudug oo warbixin ka dhageystay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa ka dood iyo falanqeyn kadib u gacan taagay si aqlabiyad ahna u ansixiyay Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
Ansixinta Degmada Guriceel ayaa timid kadib markii Golaha Wasiiradu xeeriyeen warbixinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha, dib u heshiisiinta iyo federaalka.
Madaxweyne Qoorqoor oo digniin u diray Culimada hubeysan ee Ahlusunna
Maxay tahay Tilaabada xigta ee Ahlu-Sunna kadib kabixitaankii Guriceel